iipateni ezininzi Hand netroli yerabha eziqinileyo powder wheel - China Qingdao Ummangaliso Iimoto
pu amagwebu wheel
irabha ivili eqinileyo
2018 yokuthengisa hot isibiyeli metal kwithala yokugcina yokubeka
iipateni ezininzi Hand netroli yerabha eqinileyo wheel umgubo
MDF ibhodi angle metal kwithala yokugcina boltelss yokubeka
zihlanu rivet kwithala metal
grey rivet yokugcina sheving kwithala impahla
rivet yokugcina sheving ukubonisa yokubeka
elibomvu boltless yokugcina kwithala rivet metal kwithala
kwizinga eliphezulu 3.50-4 micinga zindandela
China amasondo umenzi ezolimo 4.10 / 3.50-4 for ...
esemgangathweni yokugcina kwithala kunye nebhodi MDF
elibomvu boltless yempahla kwithala eyenziwe China
impahla rivet kwithala metal yokugcina boltless yokubeka
zihlanu powder enamathela yokugcina kwithala
90 * 45 * 180cm iimpahla kwithala yokugcina boltless kwithala
impahla grey kwi metal boltless kwithala
kwizinga eliphezulu boltles kwithala iimpahla powder enamathela metal ...
iipateni ezininzi Hand netroli yerabha eziqinileyo powder wheel umsebenzi 1.Heavy metal ungqameko eziqinileyo ivili yerabha 10 × 2 2.For generator, oomatshini, iinqwelo, isiguquli, washer Name eqinileyo amavili Ubukhulu 10 * 2.75 ipateni Line okanye ubude yakho isicelo Hub Njenge imfuneko sakho wamzalela 12.7 / 16 / 20mm compressors umoya Esetyenziswayo, iinqwelo emyezweni, ivili iikiriva isicelo Product Kufanele bonke iintlobo iinqwelo orhwebo amancinci kunye ikiriva. ezinxulumene imifanekiso iimveliso & n ...
FOB Price: US $ 0.85-2.58 / Piece
Min.Order Ubungakanani: 500 Piece / Pieces
Supply Amandla: 7000 Pieces ngosuku
iphakheji: In bulk / In ingxowa PP / kwi Pallet
Umsebenzi 1.Heavy metal ungqameko eziqinileyo ivili yerabha 10 × 2
2.For generator, oomatshini, iinqwelo, isiguquli, washer
igama amavili eqinileyo
Size 10 * 2.75
iphethini Line okanye isicelo sakho
ubude Hub Njengemfuneko yakho
wamzalela 12.7 / 16 / 20mm
ukusetyenziswa compressors umoya, iinqwelo emyezweni, iikiriva
Afanelekileyo zonke iintlobo iinqwelo orhwebo amancinci kunye ikiriva.
izinto ezinxulumene imifanekiso
Qingdao UMMANGALISO KWEZITHUTHI CO., LTD lasekwa ngo-2002, ibekwe West nonxweme Qingdao. Thina zibanga iimveliso elizweni iintlobo ngeentlobo metal kunye iishelfu zomthi, iishelfu warehouse, iishelfu emyezweni, iishelfu umsebenzi enzima, iishelfu ukuhomba yekhaya njalo hlobo imveliso yesinyithi; ibhala, amavili, DB ifom amavili njalo iimveliso zerabha nazo ngaphakathi kuluhlu lwethu imveliso.
Ngokusekelwe yokuqinisekisa umgangatho imveliso, inkampani lethu elihle kakhulu kwiimarike basekhaya angaphandle. Company ithobela "Whole-ekucebiseni komphefumlo win win nokubambisana". Iimveliso zathunyelwe eNgilani, eUnited States, kwiRiphabliki of eArmenia, Portugal, Italy, Peru, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia etc amazwe 30 nemimandla.
izithuthi ummangaliso co., Ltd iya kuba umthengisi kunye ishishini umhlobo wakho oluthembekileyo kuzo zonke komele yesinyithi, sinqwenela bonke abahlobo kunye nabaxhasi ngendlela elide ezimnandi kunye nempumelelo.
Previous: MDF ibhodi angle metal kwithala yokugcina boltelss yokubeka
Okulandelayo: okuqinileyo ivili Hand netroli eziqinileyo irabha umgubo ring yerabha wheel
solid irabha ivili
Wheel Barrow irabha solid Tire
14 intshi wheel metal ungqameko yerabha cheap 3.50-8
powder enamathela faka metal kwithala / yokubeka
3.00-4 isandla truck ikiriva yerabha eqinileyo whee ...
12 * 3.50-5 DB ikiriva ivili / igadi trailer w ...
Kusekho kukho umsantsa r & d imali ...